Ikea waxay cusboonaysiisaa baaxadeeda Symfonisk ee nalalka caqliga badan leh kuwa ku hadla | Wararka Gadget
Ikea waxay cusboonaysiisaa baaxadeeda Symfonisk ee nalalka caqliga badan leh kuwa ku hadla
Shirkadda Iswiidhishka oo wadashaqeyn ballaaran la leh Sonos waxay sii wadaa inay soo bandhigto alaab diiradda lagu saarayo maqalka iyo guriga, sidii dhowaan waxaan awoodnay inaan aragno af-hayeenka u eg sanduuqa oo aan halkan ku eegnay, hadda waxay ku jirtaa dariiqa dib -u -habaynta baaxadda Symfonisk oo leh mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn, laambadda miiska sariirta.
Hadda Sonos iyo IKEA waxay ku sharadanayaan cusboonaysiinta laambadda Symfonisk oo waxoogaa hagaajin doonta tayada codka oo ku dari doonta nidaamka Isku -dhafka iyo Isku -dhafka. Aynu eegno sheekadan cusub ee IKEA ay soo bandhigtay iyada oo la kaashaneysa Sonos oo aan dhowaan falanqeyn doonno.
Hadda waxaad kala dooran kartaa qaar ka mid ah noocyada naqshadeynta "qolofka" daboolaya guluubka, kaas oo lagu bixin doono midabo kala duwan oo ah dhalooyinka iyo walxaha dharka ah.
Cod ballaaran oo qolka buuxiya: qaab dhismeed gabi ahaanba cusub oo cusub, iyadoo la adeegsanayo hirarka caadadu, waxay abuurtaa waayo -aragnimo dhawaaq weyn meel kasta oo la dhigo.
Isku qas oo isku dhaji- Macaamiishu hadda waxay ka dooran karaan saldhigyo kala duwan oo laambad iyo laambaddo, iyo sidoo kale nalal kala duwan oo ay ugu mahadcelinayaan godka E26 / E27 ee lagu daray.
Habayn fudud: Sida dhammaan badeecadaha SYMFONISK, laambadda cusub ayaa qayb ka ah nidaamka Sonos oo si fudud ugu xira dhagaystayaasha in ka badan 100 adeegyada socodka.
Tan iyo markii la bilaabay laambaddii miiska ugu horreeysay ee Symfonisk wax badan ayaan ka barannay sida iyo meesha loo isticmaalo. Tusaale ahaan, dad badan ayaa sameecadaha ku adeegsada meel -habeen. Hadda waxaan sidoo kale siinnaa macaamiisha ikhtiyaarro naqshadeyn oo dheeraad ah, taasoo ka dhigaysa laambadda afhayeenka si fiican ugu habboon guryahooda - Stjepan Begic oo ka socda Ikea
Lambarkan cusub ee ku hadla Symfonisk ayaa laga heli doonaa dukaamada Ikea ee Maraykanka, mareegaheeda iyo suuqyada Yurub qaarkood laga bilaabo Oktoobar 12; suuqyada intiisa kale waxay imaan doonaan 2022.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Ikea waxay cusboonaysiisaa baaxadeeda Symfonisk ee nalalka caqliga badan leh kuwa ku hadla
Sonos Beam 2, markii ay u muuqatay wax aan suurtagal ahayn in la hagaajiyo wixii hore u jiray [Dib u eegis]
La kulan nolosha cusub ee EZVIZ